Sary androany 17 novambra atoandro | Hevitra MPANOHARIANA |
Sary androany 17 novambra atoandro
2010-11-17 @ 11:52 in Politika
Dia aseho anareo izany zavamisy aty an-tanàna izany. Tsy nivezivezy loatra aho fa izay akaiky ihany no nandehanako. Na izany aza dia hita ihany ny fahasamihafana. Ny tanànan'ny maro olona heverina ho sahirana no mazoto kokoa.
Maro sa vitsy ny mpandray anjara?
Fa tena misy kosa aloha ny mifidy e!
Na dia hoe mipetrapetraka aza ny mpikambana biraom-pifidianana
Mpilahatra ary ireo sa birao? mafana loatra kosa ny andro ka!
Isan'ny mpilahatra hifidy hitako be indrindra teto 67ha avaratra atsinanana
Tsy misy valopy intsony moa amin'ity fifidianana iray ity ary dia tsy miafina intsony ny safidin'ny olona raha ny fijeriko azy satria misokatra ho azy ao anaty vata ny taratasim-pifidianana sasany. Hita taratra sahady ny vato maro misafidy. Mampisavovona taratasy ao anaty vata ilay taratasy aforitra dia tahaka ireny hoe maro ireny ny mpifidy.
Efa misavovona kosa aloha ny vato ato e!
Mijoro eo fotsiny aho dia mahatsinjo izay nosafidian'ny olona teo an!
Eto no tena hahitana taratra ny ho fandresen'ny ENY!
Mety mbola hisy ny sary hafa rehefa hariva ny andro, na alina... arakaraky ny zavamisy ihany. Ny sary rehetra dia an'i Jentilisa madiodio!
Jentilisa 17 novambra 2010 amin'ny 13:52